IGeofumadas: Uqikelelo luka-2010: I-Intanethi- iGeofumadas
I-Geofumadas: Izibikezelo ze-2010: Intanethi
NgoDisemba, 2009 Internet kunye neBlogs, egeomates My, yokuzonwabisa
Ngokuqinisekileyo ndingathanda ukuba nebhola lomlingo kwaye ndikwazi ukwenza i-santero, kodwa akuyonto yam inkohliso, ndizama nje uchithe ixesha elincinci kule ntambo evuyayo kwaye le ndebe yekhofi nje kuphela umama kamasipala squeak and stick, emva kweso sobho.
Ukucacisa, kwabo bafunda izihloko kuphela: Ndingaba ndiphambene ukuba ndigqibe kwelokuba ndivale ibhlog, ngoku ndiyonwabele ngakumbi; imbi nje U-Day of Fools 'Day. Wakuba lo mcimbi ulungisiwe, masitshaye kwinto ebesinokuyilindela kulo nyaka.
Ibhobho iphetha ukuphula
U-2010 kufuneka ube ngunyaka obalulekileyo kwiindlela ezininzi ezingasafumani ndlela yokuzihlaziya. Ndithetha into eninzi evele phantsi kwe-aura yeWebhu 2.0 kodwa yayingeyonto intsha kodwa endaweni yokulinganisa into eqalele abanye.
Ubunzima bezoqoqosho buphelile, kodwa kukho ukuya kwiminyaka emibini yokujonga ukuba uqoqosho lwehlabathi luyakhula kwakhona. Okwangoku, iinkampani zokuyila (kunye nemali) sele zicwangcisile ukuyila ngokutsha, zilinde intlantsi; ayizizo ezincinci, ezinyamezele umoya ovuthayo zisithi zilungile kodwa ziyazi ukuba xa oku kungatshintshi, abanini zabelo abangasekiyo baya kuya esihogweni (ukuba abakakwenzi oko).
Ke, ngaphandle kokuba nobuchule obuninzi bemilingo, kuyacaca ukuba u-2010 ngowesibini ubuncinci kwiminyaka emithathu yokwehla, ukuba inqanaba lokuba kumjikelo wemveliso lilinde iliza elitsha ukuba lingasindi, kodwa lizibuyise; kwaye ukuba kuphela kwemveliso kwipotfoliyo, ukufa akunakuphepheka. Ngesi sizathu, ukuzincama kwamanyathelo amaninzi kunokuhamba kwimeko enzima, umntu kufuneka ajonge iimpahla ezikrazukileyo zeeprojekthi ezinje ngeWikipedia ukuqikelela okunokwenzeka kwabanye abangakafumani qhinga lokusinda ngokuzinzileyo.
Ke: Iiprojekthi ezinkulu ziya kuphila, kwaye ezincinci eziyilayo zinokudibana neeprojekthi eziphakathi. AbaNcinci abangenzi nto bayakwenza uncumo lokushiya kwaye bathi "iitafile kwakhona", kulapho sifika khona. Oku akukubi, ngumgaqo wobomi, osoloko usenzeka, kuphela ukuba kweli xesha lokukhula ngokukhawuleza kunokwenzeka ukuba kwisithuba esingaphantsi konyaka sizakubona iprojekthi enkulu isamkela ngokunyanisekileyo isicwangciso sayo somhlala phantsi kunye nokuguqula isiseko, ukumisa indawo yophando kunye nokunika ukuqhubeka kokukhoyo. Amanyathelo okuthengisa asulungekileyo aphuma ngaphandle kweshishini kwaye athengise isiseko sabathengi kunye ne-API yabo engancediyo okhuphisana nayo.
Umgweba ngeli xesha angeke kubekho ukubeka i-marhwebo, kuba loo nto ayisayi kutshintsha ukukhaba xa uqhubeka wenza ngaphezulu efanayo. Kuthetha ukuba amanye amajelo asekuhlaleni angafunwayo, iinkampani zentengiso ezikwi-Intanethi, ababoneleli beenkonzo kunye neenkonzo zefu ziya kunyamalala kanjalo.
Iiblogi kunye neeforamu kufuneka ziqhubeke nokuxhatshazwa, kodwa imeko eya kukudinwa ayinakuphepheka. Iinjini zokukhangela (ezinqabileyo ezi-3) ziya kukhetha ngakumbi ukuba zingabonakalisi izikhombisi ezivela kwi-subdomains, kwiifama zebhlog okanye kwiindawo ezishiyiweyo; Ngale nto, ubomi boluntu kufuneka ibe ngabantu abazisebenzisayo, abanika izimvo, abadibanisa ngaphandle kwenkqubo yentsholongwane eyingozi (Oko kukuthi, uluntu lokwenyani).
Unyaka wezinto ezintsha
Nangona ayizukuba kukukhula, u-2010 usenokuphawula ukuqala kwesizukulwana sesithathu, elo lizwe abathi ngokungakhathali babize iWebhu yeSemantic, engenakuze yenzeke kodwa sinokulinganiswa, nokuba kunyanzelekile. Imiqondiso emibini evula ucango lwalo mhlaba uyabonakala:
Okokuqala kukuxhomekeka kwimihla ngemihla ngaphezulu kokuxhumeka kwehlabathi, amathoyizi amatsha axhunyiwe kwi-broadband (ngokubanzi ngokubanzi) ngenxa yamanani aphantsi.
Okwesibini kukungagqibekanga kokuqhubeka nokusela iwayini elimnandi enewayini ngokutsha.
Ekudityanisweni kwezi zinto zimbini, ngokuqinisekileyo inqanaba elitsha lenziwe apho kuthi abo baxhomekeke kulo kuya kufuneka balungelelanise. Ukuba kukho ishishini, kuyakubakho imeko ... kwaye kwinethiwekhi enezigidi ezininzi, ngokuqinisekileyo kukho ishishini, ngumcimbi nje wokuba liza kuzinza ixesha elingakanani.
Kodwa asizukubona ukuba ngo-2010, asizokwazi ukuba iinqanawa ezinkulu zisingise phi. Google, Microsoft, HP, Oracle, Apple (kwaye ukuze bangasokoli, Yahoo kakuhle). Abanye, balungiselela kuphela ukuba bangadlulwa kwindlela yabo kwaye babe nexesha elaneleyo lokuzibeka ngaphandle kokuphulukana nabasebenzisi.
Iiblogi ezixhonywe kwiWordPress kuya kufuneka zilungelelanise inguqulelo entsha, ezo zibekwe kwiBlogger, ezixhaswa nguGoogle. Kwaye thina, sonwabile, ukutshaya nokubhala ngaphandle kwentloko; ewe, masilibale ukulungelelaniswa njenge-WordPress MU (phezulu!).
IiNtanethi zentlalo, ezilungele ukusebenza kwi-Facebook API okanye umqhubi walo omtsha; kwaye kude kubekho iHi5.
Iiforamu, zokuba baphinde bazivuselele, kuba into entsha ayikaphumi kule ndlela ixesha elide. Ngenye imini abantu banokudinwa ziiplanga ze ndincede nceda ngaphandle kwezicwangciso ezintsha zoluntu oluzinzileyo.
I-wikis, kuphela ukulandela, kuba ukuyila kwayo kuye kwaqina kakhulu ekuqaleni.
Twitter kunye nosapho, ukubeka iinyawo zakho emhlabathini.
I-Technorati, iindawo zokuqhawula, iifama zeblogi kunye nezinye izityalo ... nje ulungelelanise entsha format ye-RSS ... mhlawumbi kwiminyaka emibini, i-Adiós Atom.
Uninzi lolu tshintsho luza kuqala kuphela ngo-2010, kwaye abo bazakuyibona iya kuba zizizukulwana ezingaphantsi kweminyaka engama-25, abo bachitha (ngokoluvo lwethu) ixesha labo lokufaka iifoto, besabelana ngobume babo, bencokola, bekhuphela izinto ezixhonyiweyo kunye nokubukela iividiyo kuYouTube. Baya kuba yingulube ye-guinea, abo basebenzisa iitekhnoloji zamva nje, bengathengi nto ngaphandle kokuchaza imeko zehlabathi.
Ngeli xesha, ngo-2010 siza kuqhubeka nokusebenzisa i-Intanethi ngokufanayo. Ukufunda iindaba, ukuthenga izinto zokudlala, ukukhuthazwa nguGoogle Earth kunye nezinto ezinjalo, asinakulindela nto intsha, nangona sinokuyifumana inomdla ngakumbi. Okona kuninzi, ukuba omnye umhlobo ekugqibeleni ayeke ukusebenzisa i-imeyile yakhe ecaphukisayo ye-Hotmail, ukuba omnye uyaqonda ukuba akukho sizathu sokuqhubeka nokuthumela i-tweet kwaye i-Chat ilahlekelwe yincasa yayo.
Yaye mna, ndiya kuba nokuthumela ii-360 ezintsha zokungeniswa, ezinomdla kakhulu (ubuncinane kum); I-180 Ndiza kuba neentloni ngale ndawo, ngaphezu kwanini naxa ndiya kulungisa kwakhona into endiyithethayo ukuba ndithethelele i-adrenaline ecinezelekileyo ukuba ikhofi yomama-mkhwenkwe wenzelwa.
Isiqingatha somsindo, esiphakathi squeak, ephakathi chingastoso... Kodwa luhle!
Blog Umhlaba ka-Google egeomates My Wordpress
Post edlulileyo«Ngaphambilini Le yiposi yam yokugqibela
Post Next Ileta kubafundi bamOkulandelayo »
Ikhosi yeMicrostation -Funda uyilo lweCAD
Microstation -Funda uyilo lweCAD Ukuba ufuna ukufunda ukusebenzisa iMicrostation kulawulo lwedatha yeCAD le khosi ...